Hawlgalka Faransiisku ka fuliyeen Buulo Mareer iyo doorka dawladda Soomaaliya - Horseed Media
Hawlgalka Faransiisku ka fuliyeen Buulo Mareer iyo doorka dawladda Soomaaliya January 12, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleDenis Allex, a French soldier held hostage in Somalia since 2009, was killed during a raid on Friday night by French troops trying to rescue him
Wararka caalamka maanta u weyn ayaa noqdey hawlgal fashilmey oo ciidamada Komaandooska ah ee Faransiisku ka fuliyeen tuulada Buulo Mareer oo 30km Koonfur kaga beegan magaalada marka ee Xarunta Shabeelada Hoose. Hawlgalkaas ayaa la doonayey in lagu soo furto Denis Allex oo ka mid ahaa ciidamada Faransiiska oo muddo ka badan saddex sano afduub u haysteen xarakada al-Shabaab.
Taariikhda Afduubka Denis Allex
Denisa Allex iyo nin kale oo lagu magacaabo Marc Aubriere waxay ka tirsanaan jireen ciidamada Faransiiska waxa ay tageen magaalada Muqdisho bishii Luuliyo sanadkii 2009 iyaga oo la taliyaal u ahaa ciidamada dawladda oo dagaal markaas bilowdey kula jirey Xarakada al-Shabaab iyo Xisbigii burburey ee uu hoggaamin jirey Xassan Daahir Aways.
Labada sarkaal ayaa lagala baxay Hotel Saxafi oo ka mid ahaa goobaha dawladdu markaas gacanta ku haysey, waxaa la aaminsan yahay in saraakiil kamid ah dawladdu ay gacanta u geliyeen Xisbul Islaam isla amrkaana xoogaa lacag ah uga beddesheen.
Xarakada al-Shabaab oo ka awood iyo khibrad badneyd Xisbul Islaam ayaa weerar ku qaadey halkii lagu hayey labada sarkaal ee Faransiiska ah, waxaana ugu danbeyn ay noqotey in ay qaybsadan.
Marc Aubriere waxa uu ku harey gacanta Xisbul Islaam halka Denis Allex uu gacanta u galay al-Shabaab.
Marc Aubriere ayey u suurta gashey muddo 30 maalin ah kadib markii la qafaashey in uu ka soo baxsado gacanta Xisbul islaam. Inkasta oo warka baxsashada ah uu ahaa kii uu sheegay Marc Aubriere, haddana waxaa jira warar sheegaya in Faransiisku bixiyeen lacag isla markaana Xisbul Islaam ku soo hagaajiyeen waddo soo gasha Villa Somalia sidaasna ku galay gacanta dawladda dhamaadkii Agoost 2009, war kale ayaa sheegayey in uu diley saddex nin oo waardiye ka hayey kadib markii dagaal ku soo dhawaadey goobta lagu hayey, sidaasna ku soo baxsadey.
Muddo sanad ah wax war ah kama soo bixin xaaladda Denis Allex, horaantii bishii Juun ayey ahayd muuqaalkii u horeeyey markii ay soo bandhigeen Xarakada al-Shabaab taas oo lagu fafiyey Internetka, waxaana uu dalbanayey in la badbaadiyo isla markaana wada hadal lala galo kuwa afduubka u haysta. Dawladda faransiiska oo markaas uu Madaxweyne ka ahaa Nicolas Zarkozy ayaan wax jawaab ah ka bixin, inkasta oo uu jirey xiriir dawladda Faransiisku ay ku oganeyso in uu nool yahay iyo in kale.
Bishii Oktober ee sanadkii dhamaadey 2012 ayaa mar kale muuqaalkiisa oo Video ah la soo dhigey Internetka isaga o markaan la hadlaya Madaxweynaha cusub ee faransiiska Francois Hollande, waxaana uu ka dalbadey in uu soo badbaadiyo.
Xarakada al-Shabaab oo 16kii bilood ee u danbeeyey culeys miltaeri soo foodsaarey, ugu danbeyna laga wada saarey goobihii dhaqaalaha ay ka heli jireen, ayaa ninkaan u ahaa meel ay ka heli karaan lacag ay ku maalgeliyaan dagaalada ay wadaan isla markaana ku soo iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin, laba todobaad kadib markii laga qabsadey magaalada Kisnmaayo ayey muuqaalka Denis Allex soo dhigeen Internetka, Marna banaanka uma soo bixin dhaqaalaha ay ku raadinayaan in lagu madaxfurto askerigaas.
Subaxnimadii Sabtida ee maanta (12/01/2013) ayaa dadka degan tuulada Buula Mareer iyaga oo hurda shanqartuna yartahay maqleen dhawaaqa rasaasta iyo guuxa diyaaradaha helicopterka, waxaana weerarkaasi socdey 45 daqiiqo waxaana ka qayb qaatey 5 diyaaradood, qorshaha ayaa ahaa in la soo furto Denis Allex, waxaana muuqata in Ciidamada Komaandooska Faransiisku ku socdeen warbixin sirdoonkoodu u soo gudbiyey.
Weerarakaas waxaa ku dhintey
Kooxda al-Shabaab waxay dileen Denis Allex iyo laba askeri oo kamid ah ciidamada komaandooska Faransiiska al-Shabaab waxaa laga diley 17 ka tirsan dagaalyahanadooda, sidaas waxaa laga soo xiganaya Wasaaradda Gaashaandhiga Faransiiska.
Denis Allex waa nool yahay laakiin mustaqbalkiisa laba maalmood ayaa la ogaan doonaa, laba askeri oo Faransiis ahna waa ku dhinteen sidaas waxaa sheegay al-Shabaab.
Hawlgalkan ayaa lagu tilmaami karaa in uu noqdey mid dhicisoobey mar haddii aan la soo furan Denis Allex isla markaana askar kale uga dhimatey Faransiiska, waxaana tacsi u diray dalka Faransiiska meelo kala duwan oo caalmka ka mid ah.
Faransiiska ayaa laba jeer oo hore ka fuliyey gudaha Soomaaliya iyo weliba biyaha Soomaaliya hawlgal caynkan oo kale ah mid waa ku guulsyteen halka midka kale uu ku dhintey mid kamid ah dadkii Burcad-badeedu afduubka u haysteen kaas oo ahaa muwaadin Faransiis ah.
Doorka Dowladda Federaalka Soomaaliya
Dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 malahayn dawlad dhexe oo awoodleh, 12-kii sano ee u danbeeyey dalka Soomaaliya waxaa ka jirey dowlado kumeel-gaar lagu sheegay kuwaas oo aan lahayn wax awood ah.
Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya maanta u dhisan ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud, ayaa la sheegay in aysan kumeel gaar ahayn isla makraana tahay dowlad rasmi ah oo metasha Soomaaliya.
Hadaba waxaa la isweydiinayaa dalka Faransiiska oo hub iyo diyaaradoba la soo galay gudaha Soomaaliya si ay u badbaadiyaan muwaadin si sharci darro ah looga haystey muddo saddex sano ah, waxba maka ogeysiiyey arintan dowladda Soomaaliya, taas oo ay u aqoonsan yihiin in ay metasho Soomaaliya. Weerarkan waxaa ku dhintey ilaa 4 qof oo shacab ah kuwaas oo la sheegay in ay ku jirtey haweeney uurleh.
Dhanka kale Dowladda Federaalka ah Soomaaliya ayaan weli ka hadlin dhacdadii Buulo Mareer oo ciidankeedi 40km u jireen halka weerarku ka dhacay, waxaa ka hadalaya dalal shisheeye sida Britain oo uga tacsiyeynaya Faransiiska hawlgalkii askartu uga dhinteen ee fashilmey, waxaa la isweydiin goorma ayaa dowladdu ka hadleysaa hawlgalkan isla markaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaysaa in ay wax ka ogayeen iyo in kale.